फेसवुक विवादपछि जुकरबर्गलाई अमेरिकी सिनेटको प्रश्न – Puleso
फेसवुक विवादपछि जुकरबर्गलाई अमेरिकी सिनेटको प्रश्न
आठ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताका डाटा चोरिएको विषयलाई लिएर अमेरिकी कंग्रेसले फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख मार्क जुकरबर्गलाई गत सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिन प्रश्न सोध्यो । उनलाई १० घन्टासम्म सिनेट र कंग्रेसमा राखेर प्रश्न सोधिएको थियो । जुकरबर्गलाई सिनेटरहरूले ६ सयभन्दा बढी प्रश्न सोधेका थिए । अमेरिकी कंग्रेसका विभिन्न सिनेटरहरूले जुकरबर्गलाई सोधेका केही प्रश्न यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जुकरबर्गः सन् २०१५ मा क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले कुनै तेस्रो पक्षको एपबाट हाम्रा प्रयोगकर्ताको डाटा प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि हामीले त्यसविरुद्ध कदम चलायौँ । उक्त तेस्रो पक्षको एपलाई तत्कालै हटायौँ । एप निर्माता र क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई जम्मा गरेका डाटा डिलिट गर्न भन्यौँ । प्रत्युत्तरमा आफूहरूले डाटा डिलिट गरेको जानकारी उनीहरूले दिए । तर, उनीहरूलाई विश्वास गर्नु नै हाम्रो गल्ती भयो । धोका दिए । हामीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो । अब भविष्यमा फेरि यस्तो गल्ती हुन दिनेछैनौँ ।
सिनेटर नेल्सनः उक्त घटनाप्रति तपार्इंले माफी त माग्नुभयो, तर डाटा चोरी भएको विषयमा प्रयोगकर्तालाई जानकारी गराउनुभएन । जानकारी गराउने नैतिक जिम्मेवारी तपार्इंको हो कि होइन ?
सिनेटर ट्युनः फेसबुकले गोपनीयतासँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नको सामना गरेको यो पहिलो घटना पक्कै होइन । वायड म्यागेजिनका अनुसार आफ्नो कमजोरीका कारण प्रयोगकर्ताको गोपनीयता भंग भएसँगै फेसबुकले विगत १४ वर्षदेखि माफी माग्दै आएको छ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यस्तोमा तपार्इंले यसपटक मागेको माफी अगाडिभन्दा कसरी भिन्न छ रु फेसबुकले प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको रक्षा गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
(हाम्रो जिम्मेवारी यति ठूलो होला भनेर सोचेनौँ । हामीबाट ठूलो गल्ती भयो । यो मेरो गल्ती
(घृणा फैलाउने सामग्रीलाई फैलिनबाट रोक्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्दै आएका छौँ । तर, अंग्रेजीबाहेक पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो परिवेशअनुरूपको फरक–फरक भाषाको प्रयोग गर्ने अवस्थामा आपत्तिजनक सामग्रीको पहिचान गर्न अत्यन्तै कठिन छ ।
(सन् २०१५ मा क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले कुनै तेस्रो पक्षको एपबाट हाम्रा प्रयोगकर्ताको डाटा प्रयोग गरेको थाहा पायौँ । त्यसलगत्तै एप निर्माता र क्याब्रिज एनालिटिकालाई जम्मा गरेका डाटा डिलिट गर्न भन्यौँ । उनीहरूले डाटा डिलिट गरेको जानकारी दिए । तर, गरेनछन् । धोका दिए ।
सिनेटर क्यान्टवेलः सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनाव दौरान क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले ट्रम्पलाई सहयोग गरेको भन्नेमा तपार्इंको के धारणा छ रु त्यस प्रकारको सूचना प्रवाह गर्न फेसबुक कर्मचारीको प्रयोग भएको हो ?
सिनेटर लिहीः तर, मैले सोधेको प्रश्नको खास उत्तर दिन किन सक्नुभएन रु
जुकरबर्गः म।।म त्यो खास विषयमा जानकार छैन ।
सिनेटर लिहीः ठीक छ । त्यसो हो भने यसको उत्तर खोजेर मसमक्ष ल्याउनुहुन्छ रु
सिनेटर विकरः फेसबुकले एन्ड्रोइड फोन प्रयोगकर्ताको कल तथा टेक्स्ट हिस्ट्री जम्मा गर्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, के यो साँचो हो रु
जुकरबर्गः सिनेटर महोदय, म यस विषयमा ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । मेरो समूहसँगको छलफलपछि पक्कै केही भन्न सक्छु ।
सिनेटर विकरः तपार्इंलाई थाहा छैन रु
सिनेटर विकरः यसको उत्तर कहिले दिनुहुन्छ रु
सिनेटर ग्राहमः इन्टरनेट उद्योगलाई नियमन गर्न आवश्यक नियम बनाउन हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ रु
सिनेटर ग्राहमः ठीक छ । त्यसो भए हामीलाई केही सम्भावित नियम पठाउनुहुन्छ रु
स्रोत: नयाँ पत्रिकाबाट